Maxkamadii dembiyada Rwanda oo xirantay - BBC Somali
Maxkamadii dembiyada Rwanda oo xirantay
2 Disembar 2015
Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada Rwanda(ICTR) ayaa qabatay xaflado rasmi ahaan loogu maamuusayo xiritaanka howl galladeeda kaddib in ka badan 20-sano.
Maxkamadda oo ku taallay magaalada waqooyiga Tanzania ee Arusha ayaa loo sameeyay in lagu maxkamadeeyo dadka la tuhmayo ee muhiimka ah ee ka dambeeyay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda sanadkii 1994-tii.
Xafladahan salka ku haya xiritaanka maxkamadaasi ayaa soconaya muddo saddex cisho ah.
Waxaa ka qeyb qaadanaya xafladan dad badan oo ka tirsan shaqaalaha hadda iyo kuwii hore, garsoorayaal iyo marqaatiyayaal sidoo kale isugu soo baxay magaalada waqooyiga ee Arusha.
Saraakiil sar-sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay, dowladaha Rwanda iyo Tanzania ayaa sidoo kale ka soo qeyb galay, oo uu ka mid yahay la taliyaha gaarka ah ee xoghyaha guud ee Qaramada Midoobay ee ka hortagga xasuuqa, Adama Dieng.
Labaatan sano oo maxkamaddaasi ay dhisneyd, waxay isticmaashay 2 billion oo doollar, waxaana maxmadda ay qabatay 93-kiis, waxaana xabsi ay ku xukuntay 62-qof.
Waxa ay u aheyd safar dheer maxkamadda, oo badanaa la tacaalaysay shaqsiyaadka sar-saree ee lagu eedeeyay in ay qorsheeyeen xasuuqa.
Dhibaatooyinka inta badan ka hor imaanayay maxkamada waxay ahaayeen helidda markhaatiyayaal doonaya in ay marag furaan.
Walow guulaha ay gaartay ay dad badani ammaaneen, kuwaas oo sheegay in ay adkaan laheyd in la helo dadka dhibataadaasi geystay si la ciqaabo, haddana dadka sida weyn u dhaliila waxaa ka mid ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame, oo ku doodaya inay ahayd in maxamaddu ay intaa ka badan qabato, marka la eego waqtiga la siiyay iyo lacagta lagu maalgeliyay.
Kiis ay ku lug leeyihiin 6-qof ayaa weli la sugayaa, waxaana garsoorayaasha laga filayaa inay xukumaan toddobaadka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee 8-qof oo la tuhmayay oo dembi lagu waayay ayaa weli raadinaya dal magangelya, kuwaas oo kiiskooda aan weli la xallin.